Inguqulelo entsha yeAkira 0.0.14 sele ikhutshiwe kwaye olu lutshintsho lwayo | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeAkira 0.0.14 sele ikhutshiwe kwaye olu lutshintsho lwayo
Emva kweenyanga ezisibhozo zophuhliso I-Akira 0.0.14 yomhleli wegraphic vector uguqulelo olutsha olukhutshiweyo eyenzelwe ukudala uyilo lomsebenzisi. Eyona njongo iphambili yale projekthi kukudala isixhobo esisesobungcali sabayili bokuyila, into efana neSketch, iFigma okanye iAdobe XD, kodwa ijolise ekusebenziseni iLinux njengeqonga eliphambili.
Ngokungafaniyo noMdali weGlade kunye neQt, iAkira ayenzelwanga ukuvelisa ikhowudi okanye indawo yokusebenza usebenzisa izixhobo ezizodwa, kodwa endaweni yoko ijolise ekusombululeni imisebenzi ngokubanzi, Uyenza njani uyilo lojongano, unikezelo kunye nemizobo yevektha. I-Akira ayihambelani ne-Inkscape, njengoko i-Inkscape ijolise ikakhulu kuyilo lokuprinta, hayi kuphuhliso lomdibaniso, kwaye iyahluka kwindlela yayo yokulungiselela ukuhamba komsebenzi.
UAkira isebenzisa eyayo ».akira» ifomathi yokugcina iifayile, eyifayile ye-zip eneefayile ze-SVG kunye ne-git repository yendawo eneenguqu. Ukuthumela umfanekiso kwi-SVG, JPG, PNG, kunye nePDF kuyaxhaswa. U-Akira ubeka imilo nganye njengoluhlu olwahlukileyo olunamanqanaba amabini okuhlela:
Inqanaba lokuqala (ukuhlela imo) lifakiwe ngexesha lokukhetha kwaye libonelela ngezixhobo zotshintsho oluqhelekileyo njengokujikeleza, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, njl.
Inqanaba lesibini (ukuhlela umendo) likuvumela ukuba ushukume, ungeze, kwaye ususe ii-node kwindlela yemilo usebenzisa ii-Bezier curves, kunye nokuvala okanye ukwaphula iindlela.
1 Iindaba eziphambili zeAkira 0.0.14
2 Uyifaka njani i-Akira ku-Ubuntu kunye neziphumo?
Iindaba eziphambili zeAkira 0.0.14
Kule nguqulo intsha yeAkira 0.0.14 kuyacaciswa ukuba uhlengahlengiso olupheleleyo loyilo lwamathala eencwadi lwasebenza ukuze lusebenze ngelaphu.
Olunye lotshintsho olubonakalayo, umilisele imowudi yokuhlela yeGridi yokuma ngokuchanekileyo kwezinto xa usondeza. Igridi ivuliwe ngokucinezela iqhosha kwipaneli kwaye icime ngokuzenzekelayo xa isikali singaphantsi kwe-800%, kunye nesakhono sokwenza imibala yemigca yeepikseli yegridi.
Singafumanisa ukuba inkxaso yezikhokelo zenziwe ukulawula ukubamba kwimida yeemilo esele zikho (ii-Snap Guides). Ixhasa ukuseta umbala kunye nomqobo wokubonakala kwezikhokelo.
Olunye utshintsho evelele kule nguqulo intsha:
Inkxaso eyongeziweyo yokuguqula ubungakanani bezinto kuwo onke amacala.
Isakhono sokongeza imifanekiso sinikezelwa ngokutsala ngemouse kwisixhobo somfanekiso.
Yongeze amandla okwenza inkqubo yokugcwalisa kunye nokucacisa imibala kwinto nganye.
Yongeze imowudi yokulinganisa izinto ngokunxulumene neziko.
Isakhono sokudlulisa imifanekiso kwi-canvas ifakiwe.
Ukwenziwa komsebenzi kwenziwe.
Kwixesha elizayo elikufutshane, ukwakha kuya kulungiswa ngohlobo lweephakheji ze-OS ezisisiseko kunye neephakeji ze-Snap. Ujongano luyilelwe ngokwezikhokelo ezilungiselelwe yiprojekthi ye-Elementary OS kwaye ijolise kwintsebenzo ephezulu, intuition kunye nembonakalo yanamhlanje.
Uyifaka njani i-Akira ku-Ubuntu kunye neziphumo?
Njengoko besitshilo ekuqaleni, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uAkira Ndikwinqanaba lophuhliso Ukuqokelelwa okwangoku okubonelelweyo kunokuba neempazamo.
Kodwa kwabo banomdla Ngokwazi le projekthi, ukuyivavanya okanye nokuba ungayayixhasa, unokukhuphela kwaye ufake iAkira usebenzisa nayiphi na indlela esabelana ngayo ngezantsi.
Ngokubanzi nakuphi na ukuhanjiswa okusekwe kwiinguqulelo ezimbini zokugqibela ze-LTS zoBuntu Kufuneka ube sele unenkxaso ye-Snap kwaye ngaloo nto baya kuba nakho ukufaka u-Akira.
Kwimeko yabo bangabo Abasebenzisi be-OS bokuqala banokukhuphela kwaye bafake usetyenziso ngokuthe ngqo kwiAppCenter.
Ngoku, ukubuyela kwabanye, kufuneka sivule i-terminal kwaye siza kuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Kwimeko ekude ongakhange ufakele kuyo kwaye yenziwe ukuba isebenze kwinkqubo yakho, ungakwenza oku ngokuchwetheza oku kulandelayo:
Kwaye ukulungele ngayo, ungenza umyalelo wangaphambili wokufaka iAkira.
Ekugqibeleni, enye indlela elula ukuze ukwazi ukufaka iAkira kwinkqubo yethu ngoncedo lweephakeji zePlppak, ngenxa yoku kufuneka sifakelwe le nkxaso kwaye siyenze isebenze.
Ukufaka iAkira kwiFlatpak kufuneka sivule i-terminal kwaye siza kuchwetheza oku kulandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » Inguqulelo entsha yeAkira 0.0.14 sele ikhutshiwe kwaye olu lutshintsho lwayo
Ubuntu 21.10 Impish Indri iqala ukukhula kwayo kwaye sele siwazi umhla wokukhutshwa.
IGeary 40, uhlaziyo olutsha luza kule imeyile yeposi